Ku qanci Suuqgeynta Mawduucaaga adoo Aqoonsanaya 6daas Nusqaamood | Martech Zone
Ku qanciya Suuqgeynta Mawduucaaga adoo aqoonsanaya 6daas nus
Arbacada, February 18, 2015 Douglas Karr
Waxaan ku faraxsanaa inaan sameeyo webinar shalay anigoo qayb ka ah Shir-Madaxeedka Wax-ku-oolka Suuqgeynta Macluumaadka Degdega ah. Weli waad iska diiwaan gelin kartaa bilaash, waxaad daawan kartaa cajaladaha, waxaadna kala soo bixi kartaa buugaagta iyo bandhigyada. Mawduucayga gaarka ahi wuxuu ku saabsan yahay istiraatiijiyad aan ka shaqeynaynay macaamiishayada dhowrkii sano ee la soo dhaafay garashada nusqaamaha istiraatiijiyadooda content taas oo ka caawinaysa iyaga inay dhisaan maamulka oo ay kaxeeyaan beddelaad.
In kasta oo tayada nuxurka ay muhiim u tahay guusha macaamiisheena, haddana su'aal kama taagna waa immisa nuxurka la qoro. Dhammaan macaamiisheennu waxay aqoonsan yihiin inay hadda yihiin kuwa wax daabaca. Su’aasha cusub ayaa ah maxay qorayaan. Shaqadeenu waxay raadineysaa nusqaamaha xeeladaha macaamiisha 'macaamiisha' iyo soo saarista xalalka sida ugu fiican u buuxin kara farqigaas.
Macaamiishayada ugu waaweyn, ee leh qolka wararka oo dhan, maahan hawl fudud. Waxaan u soo dhoofineynaa in ka badan 2 milyan oo rikoodh toddobaad kasta mashiin si weyn loo qaabeeyey oo loo qaabeeyey oo loo yaqaan 'Big Data engine' oo aan ka dhignay halkaas oo aan ku jarjari karno isla markaana ku jajabin karno raadinta, bulshada iyo iyo Analytics xogta sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si loo aqoonsado fursadaha. Boggeena gaarka ah, way ka fududdahay. Waxaan dib u eegis ku sameynaa qalabkayaga waxaanan sameynaa cilmi baaris bil kasta si aan u helno fursadaha. Waa tan burburka:
Helitaanka Nusqaamaha Istaraatiijiyadda Mawduucaaga
Su'aalaha & Jawaabaha Hantidhawrka - hubi galkaaga la diray (gaar ahaan kooxdaada horumarinta / iibinta kooxda). Falanqaynta galkayga la ii soo diro, inta badan waxaan helaa su'aalo ay weydiyaan macaamiisheennu iyo rajo. Haddii macaamiishaada iyo rajadaadu ay ku weydiinayaan, fursadaha ayaa ah in dadku ay baarayaan oo ay raadinayaan macluumaadkaas khadka tooska ah.
Competition - Waa maxay qiimeynta macaamiishaadu ee aad rabto inaad rabto? Waxaa jira qalab weyn oo suuqa yaal halkaas oo aad si fudud ugu qori karto cinwaankooda oo aad la imaan karto liistada ereyada muhiimka ah ee ay ku kala sarreeyaan - iyo bogagga qiimeynta ku jira. Xitaa ka sii wanaagsan, waad ku qori kartaa boggaaga oo waxaad eegi kartaa bogag kale oo leh ereyo isku mid ah. Tani waa kayd hantiyeed oo xogta farqiga ah!
Isbeddellada - Waa maxay raadinta isbeddellada ku dhacayaan ereyadaa muhiimka ah waqti ka dib? Tani waxay awood kuu siineysaa inaad qorsheyso jadwalka sanadlaha ah ee wax ku oolka ah - helitaanka xilliyada ugu fiican ee aad ku qorsheyso waxyaabahaaga. Haddii aad jeceshahay inaad kor u qaaddo darajo, isticmaal jadwalka tifaftirka - Kapost, Jadwalka iyo Beddelka Socda loogu talagalay WordPress, Isku-darka on Oracle Suuq Cloud waa dhowr.
Shuruudaha la xiriira - Maahan kaliya waxa ku saabsan aad iibiso, waxay ku saabsan tahay dhagaystayaasha iyo wixii macluumaad ah waxay raadinayaan. Ku qor ereyga muhiimka ah ee Google oo hubi halka ay ku taal raadinta ereyada la xiriira. Isticmaal qalab sida WordTracker ah oo xitaa waad kala shaandheyn kartaa su'aalaha baaritaanka guud ee dadku isticmaalayaan.
Mawduucyada Goobta - Kala sareynta maxalliga ah kama hor istaageyso inaad ka gaarto darajo qaran ama mid caalami ah! Ka hadal ganacsiyada iyo goobaha si aad u kala sarreysid gobol ahaan badiyaa waxaad ka heli doontaa inaad ku sarreysid shuruudaha ballaadhan ee aan ahayn goobta. Ku guuleysta deegaanka waxaadna sii wadi doontaa ballaarinta saameyntaada wixii ka baxsan magaaladaada ama gobollada aad u adeegto.
Bixi Qiime - Istaraatiijiyado badan oo mawduucyo ah ayaa diiradda saaraya astaanta, badeecada ama adeegga. Mawduucaagu waa inuu diirada saaraa dhagaystayaashaada. Caawinta dhagaystayaashaada inay guuleystaan ​​waxay xaqiijineysaa kalsoonida iyo awoodda oo dhiseysa dardar - taasoo u horseedi doonta beddelaad. Ka xaddido nuxur weyn ilaha laga kalsoon yahay si loo sii wado hawlgelinta. Haddii aad isku dayeyso inaad la xiriirto xirfadleyda iibka, sii waxyaabo kale oo waaweyn oo ka caawiya inay guuleystaan. Haddii aad isku dayeyso inaad caawiso milkiilayaasha guryaha, wadaagista maqaallada ka caawinaya wax kasta oo ka socda caymiska illaa beddelaadda miirayaasha ayaa fiican. Mawduucu markasta maahan inaad iibiso.
Hadda oo aad haysatid mowduucyo waawayn oo aad wax ka qorto, waxaa la joogaa waqtigii loo baahnaan lahaa in loo tartamo tartanka. Aad u baahan tahay inaad wanaaji heck out of aad content oo qor si ka fiican tartanka. Badanaa tan macnaheedu waa inaad si qoto dheer u faahfaahinto, u adeegsiga muuqaalka si wax ku ool ah, oo ay ku jirto xogta taageerida ama tixraacyada. Badanaa tan waxaan ku guuleysaneynaa iyada oo aan u horumarineyno faahfaahinta iyo caddaaladda macaamiisheena, ka dibna qorno maqaallo faahfaahsan oo ku guuleysta raadinta!
Falanqaynta - Falanqeeyaan boggaga ku guuleysta qaab-dhismeedkooda, kala sarraynta goobta, dhexdhexaadiyeyaasha gundhigga ah, cinwaannada, cinwaannada, iyo cinwaannada hoosta si aad ugu horumarin karto bog aad uga wanaagsan. Macluumaadka iyo fiidiyowyadu waa kufiican yihiin tan.
Shareworthy - Hubso in boggaagu si fudud loo wadaagi karo, isagoo si wax ku ool ah uga faa'iideysanaya microformats iyo badhamada wadaagista bulshada si loo kordhiyo gaaritaankiisa.
Kor - Iibso xayeysiinta la bartilmaameedsaday si loo hubiyo inaad gaarsiinayso qofka kula tartamaya.
Tags: jawaabahadhagaystayaashaqiimaha dhismahafalanqaynta nuxurka tartankaContent Suuqistaraatiijiyada contentisbeddellada ku jiraisbedelka googlegaro farqigawaxyaabaha ku saleysan goobtasoo bandhigida suuq geyntabandhigsu'aaloslidesharenuxur qiimo lehqiimaha
Baadhitaanka Suuq B2B: 9 Faa’iidooyinka Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada